Erdogan: Waa qalad in Sweden iyo Finland loo ogolaado inay ku biiraan NATO
HomeWararka CaalamkaErdogan: Waa qalad in Sweden iyo Finland loo ogolaado inay ku biiraan NATO
May 14, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
: Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ay khalad tahay in Sweden iyo Finland ay ku biiraan NATO, isagoo tixgelinaya in ku biiritaanka labada dal uusan faa’iido u lahayn Turkiga. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee France Press.
“Si wanaagsan uma eegno,” ayuu Erdogan u sheegay suxufiyiinta isagoo ku sugan Istanbul salaaddii Jimcaha kaddib. Iskandaneefiyanka waa hoyga ururada argagixisada.” Sida laga soo xigtay TT, isaga oo tixraacaya taageerada siyaasadeed ee ay siiyaan wadamada Scandinavian-ka ururada Kurdida ee Turkigu u arko cadaawad.
Mawqifka Erdogan waxa uu ku soo beegmayaa isla maalintii ay xukuumadda iyo xisbiyada baarlamaanka Sweden soo bandhigeen falanqeyntooda ku aaddan siyaasadda ammaanka, taas oo ay ku soo gunaanadeen in ka mid ahaanshiyaha Sweden ee NATO ay sare u qaadi doonto ammaanka Sweden.
Waxaa la filayaa in xisbiga Socialdemokraterna ee Sweden uu ku dhawaaqo mawqifkiisa ugu dambeeya ee xubinimada NATO Axadda soo socota.
Ku biiritaanka Iswiidhen ee isbaheysigan ayaa haddii ay go’aansato waxay u baahan tahay in ay ansixiyaan baarlamaannada 30-ka waddan ee xubnaha ka ah NATO oo uu Turkigu ku jiro.